Meander-ka Meander, dabeecad run ah oo dabiici ah | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Ekotourism, Espana
Meerro-ka Melero-ka waxaa lagu sharaxay inuu yahay dabayl dabiici ah. Waad ogtahay in loo yaqaan meander one foorar fiiqan webi kasta oo ka taga qayb ka mid ah isku-xirnaanta dhulka iyo qulqulka kale.
Laakiin, kahadalka Melero, qalooca in Webiga Alagón waa mid aad u qulqulaya oo ku dhowaad wuxuu keenayaa gasiirad. Si kastaba xaalku ha ahaadee, samee muuqaal u gaar ah oo si fiican ugu habboon agagaarka duurjoogta iyo dabeecadda sida ugu fiican. Hadaad rabto inaad soo booqato jawharadan gobolka Cáceres, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Aaway meertadii Melero
2 Maxaa laga qabanayaa dariiqyada Melero
2.1 Aragtida xayawaanka: boodboodka
2.2 Wadooyinka socodka
3 Xoogaa cilmiga geology-ga: Sidee loo sameeyay meertada?
4 Goorma ayaa la booqanayaa meeriska Melero?
5 Maxaa la sameeyaa hareeraha Melero?
Aaway meertadii Melero
Sidaan kuu sheegnay, yaabkan dabiiciga ah ayaa laga helay xadka Extremadura oo leh Castilla y León. Si gaar ah, waxay ku taal gobolka Cáceres Laas Hurdes. Magaalada ugu dhow ayaa ah Ríomalo de Abajo, markiisana ka tirsan degmada Wadada Morisco.
Sidaa darteed, habka ugu wanaagsan ee lagu tagi karo meertada waxay ka timid Ríomalo. Dhanka kale, si aad u timaaddo magaaladan, waxaad leedahay laba waddo oo gobolka ah. Haddii aad ka soo safreyso waqooyiga, midka ku habboon ayaa ah SA-225, halka, haddii aad ka sameyso koonfurta, waa inaad qaadataa Ex-204. Markaad tagto Ríomalo, waxaad leedahay a wadada kaynta taasi waxay si toos ah kuu geyn doontaa meeriska Melero.
Maxaa laga qabanayaa dariiqyada Melero
Caqli ahaan, waxa ugu horeeya ee aad ku sameyn karto aagga meertada ayaa ah ku raaxayso muuqaalkeeda cajiibka ah. Si tan loo sameeyo, barta ugu fiican meesha waa aragtida la yiraahdo Kii hore, kaas oo aad kahesho aragti horudhac ah oo layaabkan dabiiciga ah.
Laakiin booqashadaada Melero waxay sidoo kale ku siinaysaa fursado kale oo badan. Wax yar ka dib markaad ka tagto Ríomalo de Abajo, waxaad ka heli doontaa kan weyn barkadda dabiiciga ah taasi waxay ka kooban tahay wabiga Ladrillar, halkaas oo aad ku qaadan karto qubeys nasasho leh.
Aragtida xayawaanka: boodboodka
Markaa waad raaci kartaa wadada dhex marta geedaha geedaha geedaha iyo laabta si aad u gaarto aragtida aan soo sheegnay. Marka tan, waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad ku raaxeysato aragtida culus ee meeriska. Sidoo kale waa tixraac si loo ogaado noocyada sida griffon gorgor, ka xuurta madow ama gorgor la rujiyay.
Sidoo kale, dhib kuma aha adiga inaad ku qanacdo cabitaanka deerada xeebta Alagón. Iyo xitaa, waqtiga saxda ah, waa goob heer sare ah oo lagu fiirsado bellowing ah. Sidaad ogtahay, kani waa magaca waqtiga deeradu kulaylka ku jirto oo ku beegan dayrta. Ragga waxay soo saaraan dhawaqyo xasaasi ah waxayna isku dhacaan guntooda si ay u calaamadeeyaan dhulka, taasoo keeneysa muuqaal dabiici ah oo dabiici ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad hoos ugu dhaadhacdo meertada lafteeda. Xaaladdan oo kale, ka hor intaadan gaarin La Antigua, waxaad leedahay fargeeto toos kuu geyn doonta salka dhacdadan dabiiciga ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa aragti ballaadhan oo muuqaal ah Sierra de Béjar.
Laga soo bilaabo magaalada Ríomalo lafteeda waxaa jira dhowr waddo-socod oo kuu oggolaan doonta inaad ku raaxeysato muuqaalka quruxda badan ee ka kooban meeriska iyo hareeraheeda. Waxaa ka mid ah, waxa loogu yeero Verea de los Aceituneros. Ku soo biir deegaanka la sheegay Gariiradda waana qiyaastii labaatan kilomitir. Kaliya kuma sameyn kartid lug laakiin sidoo kale baaskiil iyo xitaa gaari. Laakiin, xaalad kasta, waxaad ku raaxeysan kartaa kaymaha cajiibka ah ee cajiibka ah.
El Melero xilliga jiilaalka
Waddo kale oo qurux badan ayaa ah Kalluumeysatada Verea. Way ka fududdahay, maadaama dhererkeedu yahay saddex kilomitir. Waxay u socotaa, si hufan, laga bilaabo Ríomalo illaa aragtida La Antigua waxayna sidoo kale ku siisaa dhir diiran.
Oo ay la socdaan kuwii hore, waxaad dhex mari kartaa Wadada Chorreón del Tajo, kaasoo ku dhammaada biyo-dhac aad u qurux badan; tii La Tallaabada de la Mora, taas oo aad ka heli doontid dhagxaanta dhagxaanta sida petroglyph-ka magaceeda siiya, iyo tan isha La Teja. Marka la soo koobo, waxqabadyada kale ee aad sameyn kartid intaad booqashadaada Melero ku jirto waa kalluumeysiga oo aad ku degtid doon yar ama catamaran. Kuwaas oo dhammaantood ku jira deegaan aan la barbardhigi karin.
Xoogaa cilmiga geology-ga: Sidee loo sameeyay meertada?
In kasta oo waxa xiisaha leh ay tahay in lagu raaxeysto muuqaalkiisa gaarka ah, haddana sidoo kale waa u xiiso in la ogaado sida meeriska loo sameeyay Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan dhacdooyinkan dabiiciga ah. Laakiin midka la xidhiidha Geology wuxuu leeyahay asalkiisu wuxuu la xiriiraa carqalada dhulka. Tusaale ahaan, sandbar. Kuwani waxay ka dhigaan qulqulka webiga, si looga fogaado, in loo leexiyo. Nabaad guurka wuxuu qabtaa shaqada harsan si uu u hagaajiyo wadada biyo mareenka ah.
Goorma ayaa la booqanayaa meeriska Melero?
Waqti kasta oo sanadka ka mid ah ayaa kuugu wanaagsan inaad u timaaddo inaad aragto meertada. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso xilliga daadadka ee wabiga Alagón, taas oo ah, gudaha guga ama dayrta. Sababta ayaa ah mid aad u fudud: maaddaama webiga uu sido biyo badan, qalooca iyo jasiiradda uu ku dhowaad dhammaystiro ayaa si fiican looga mahadceliyaa.
Maxaa la sameeyaa hareeraha Melero?
Sidaan kuu sharaxnay, layaabkan dabiiciga ah wuxuu kuyaala badhtamaha gobolka of Laas Hurdes iyo in ka sii badan gaar ahaan degmada Wadada Morisco. Guri-beereedka ugu dhow ama tuulada miyiga yar waa Ríomalo de Abajo, meesha aad ku booqan karto kaniisadda of Our Lady of Murugo, kaas oo ku yaal sawirka gabadha bikradda ah ee isku magaca ah, ilaaliyaha magaalada.
Laakiin waxa ugu muhiimsan guryahaan beeraha ah ee Hurdan ayaa ah naqshadaha caanka ah. Guryaha waxaa lagu dhisay dhagxaan fara badan sidoo kalena saqafyada waxaa laga sameeyay isla wax. Sida laga soo xigtay khubarada, qaabkan guryaha loo dhiso wuxuu ku xiran yahay palloza ee waqooyi-galbeed ee Peninsula wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa Roman, gaar ahaan, Celtic.
Dhinaca kale, beeraha kale ee degmada Caminomorisco waxaad sidoo kale ku arki kartaa taalooyin xiisa badan. Tusaale ahaan Cambroncino waxaad leedahay kaniisadda Santa Catalina ama Las Lástimas, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad, oo laga yaabo inuu yahay dhismaha ugu muhiimsan farshaxanka gobolka oo dhan.
Gabagabadii, the meeriska meeriska waxay samaysaa muuqaal gaar ah oo qurux badan, dabeecad run ah oo dabiici ah. Iyo, agtiisa, waad booqan kartaa gobolka Laas Hurdes, waa dhul ay qaab dhismeedkeedu soo jireenku ka muuqdo. Miyaadan dareemayn inaad u safreyso meeshan Extremadura? Waa hal talaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Melero meander